टुहुरो गणतन्त्र ! - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
टुहुरो गणतन्त्र !
गणतन्त्र दिवश विषेश
सोमवार, जेष्ठ १५, २०७४
गणतन्त्र कागजमा सीमित छ । गणतन्त्र संविधानका धाराहरुमा कैद छ । गणतन्त्र नेताको सनक र तस्करको पैसामा किनबेच भैरहेको छ । जनताले अनुभुति गर्ने किसिमको गणतन्त्र ल्याउन, सबै नेपाली खुशी हुने अवस्था सिर्जना गर्न फेरी अर्को जनआन्दोलनको आवश्यकता छ । अहिलेसम्मका सबै अनुभवहरुले भन्छन्, व्यवस्था परिवर्तन गरेर मात्र आम मानिसको जीवनमा परिवर्तन नआउँदो रहेछ ।
आज बिहानै मोबाईलमा नयाँ एसएमएस आएको संकेत बज्यो । ब्यँुझन खोज्दै गरेका आँखाहरु र अल्छी हातले मोबाईलको प्याटर्न खोलेँ । नेपाल टेलिकमबाट आएको एसएमएसमा ‘गणतन्त्र दिवश, २०७४ को शुभकामना’ भनेर लेखिएको थियो । यो शब्द पढ्न साथ कताकता नाटक जस्तो र कताकता गाली गरिएजस्तो लाग्यो । त्यो भन्दा पनि बढी ब्यङग्य गरिए जस्तो महशुस भयो । सुचना थाहा पाउन साथ हाम्रा नेताहरुका अनुहार, बोली, व्यबहार र सहिदहरुका अनुहार सरसर्ती दिमागमा आए ।
यसो सम्झिएँ विगतमा गणतन्त्र ल्याउने, अझ भनौँ साम्यवादको स्वर्णीम सपना पुरा गर्न मारिएका छिमेकी भीम दाई, खान नपाउने दलितको छोरा लोकेन्द्र दाई र स्कुलबाट फर्किदै गर्दा पहिले बलात्कार पछी मृत्युवरण गर्नुभएकी सम्झना दिदीको धुमिल तस्वीर मानसपटलमा आयो । अझ विषेश गरी आफै सक्रियतापुर्वक सहभागी भएको २०६२÷०६३ मा भएको दोश्रो जनआन्दोलनमा भएका घटनाहरुलाई सम्झिएँ । त्यतिबेला नेताहरुले गरेका भाषणहरु र अहिले उनिहरुले देखाएको व्यबहार बीच कुनै तालमेल छ ? अहँ पटक्कै पनि छैन ।
करिब पचास लाख हाम्रा दाजुभाई, दिदीबहिनीहरु खाडीमा पसिना बगाउँदै छन् । गाउँहरुमा बृद्धबृद्धा र बालबालिका मात्र छन् । यतिसम्मकी लास जलाउने मानिस समेत गाउँमा भेट्न मुस्किल छ । टन्न अन्न फल्ने खेतबारीमा बनमारो सुमुक्क भएको देखिन्छ । मानिसहरुका चेहरा अँध्यारो छ । उनिहरुको ओठमा हाँसो देख्न सकिने अवस्था छैन ।
करिब पचास लाख हाम्रा दाजुभाई, दिदीबहिनीहरु खाडीमा पसिना बगाउँदै छन् । गाउँहरुमा बृद्धबृद्धा र बालबालिका मात्र छन् । यतिसम्मकी लास जलाउने मानिस समेत गाउँमा भेट्न मुस्किल छ । टन्न अन्न फल्ने खेतबारीमा बनमारो सुमुक्क भएको देखिन्छ । मानिसहरुका चेहरा अँध्यारो छ । उनिहरुको ओठमा हाँसो देख्न सकिने अवस्था छैन । समाज जात, धर्म र भेगमा विभक्त छ । खाना नपाएर बाजुरा र बझाङमा मानिसहरुले रुवाबासी गरिरहेको खबर दिन प्रतिदिन आईरहेका छन् । समयमै अस्पताल जान नसक्दा हुम्ला, जुम्लामा सुत्केरी महिलाको ज्यान गएका खबरहरु काठमाडौँका पत्रिकाहरु आउने क्रम बढिरहेको छ ।
यता शहरमा पनि अवस्था यो भन्दा भिन्न छैन । त्रिभुवन विमानस्थलमा दैनिक दर्जन भन्दा बढी लासका बाकसहरु भित्रिरहँदा ती बाकसमा घोप्टो परेर रुनेहरुको वेदना कसले बुझ्ने ? जायजेथा बेचेर विश्वविद्यालयको औपचारिक शिक्षा पुरा गरेको युवा रोजगारी नपाउँदा यो मेरो देश हो की होईन भन्ने सम्मको प्रश्न मनमा खेलाउन पुग्छ । बढ्दो महङगीले छपक्कै ढाकेको छ । भ्रष्टाचार र कमिशनतन्त्र यति धेरै मौलाएको छ की, शहरमा भेटिने सबै मानिसहरु दलाल र ठग हुन भन्ने सम्मको मनोसामाजिक अवस्था मौलाउँदै छ । एक अर्का बीचमा संसय र अविश्वास छ ।
यि कुराहरु सयमा सय प्रतिशत यथार्थ हुन भन्नेमा सायद दुईमत नहोला । सिर्फ वंशका आधारमा दरवारमा बसेर हुकुम चलाउने राजाबिनाको व्यवस्थालाई मात्र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनिएको हो ? नेपाली जनताको वर्तमान अवस्था र अमेरिकाको भुक्ने कुकुर एकै किसिमको देखिन्छ । गणतन्त्र आउनु अघि व्यवस्थाका विरुद्ध बोले हत्कडी लगाइन्थ्यो, अहिले जतिसुकै असन्तुष्टि र विरोध भएपनि राज्यले सुनेको नसुन्यै गर्छ । एउटा नागरिक उपचारको अभावमा मरिरहेको छ । त्यही नागरिकता बोकेको नेता उपनामले परिचित मानिस सामान्य भन्दा सामान्य उपचारकै लागि राज्यकोष लुटेर विदेश जान्छ ।
पन्ध्र हजार मानिसहरुको लास कुल्चिदै दुई पटक सिंहदरबारको आशनमा आशिन त भए तर जनयुद्धका नाममा ज्यान गुमाउनेहरु, अपाङग र घाइतेहरुका पक्षमा के गरे ? बरु कमरेड प्रचण्ड आज नेपालका सबैभन्दा धनी मानिस बनेका छन् ।
जनताले केही कुरा माग्दा कानुनको डण्डा लगाइन्छ । तर त्यस्ता हजारौँ निर्णयहरु नेताहरुले मिलेर गर्दा सब देश र जनताका पक्षमा गरिएको भनिन्छ । एक कौडी आम्दानी नभएका नेता र उनका आफन्तहरुका नाममा रियल स्टेट, हाउजिङ र ठुलठुला कम्पनीको शेयर छ । विदेशमा पसिना बगाएर रेमिट्यान्स पठाउने युवाहरुको उद्दार र उपचारमा राज्यले एक पैसा पनि खर्च गर्न उचित ठान्दैन । यो उकुस मुकुस यत्रतत्र छरिएको छ ।
गणतन्त्र ल्याउने नाममा धेरै नेपाल आमाका सपुतहरुले ज्यान गुमाए । धेरै चेलिहरुले सिउँदो पुछे । तर आज त्यो वर्गका मानिसहरु उपेक्षित बनेका छन् । गरिबी र अशिक्षाको कुचक्रमा फसेका छन् । उनिहरुलाई मर्न र मार्न लगाउने नेताहरु एउटा राजाको ठाउँमा छोटे राजा बनेका छन् । गणतन्त्र ल्याउन बन्दुक बोक्न लगाउने कमरेड प्रचण्डको हर्कत त झनै रोचक छ । पन्ध्र हजार मानिसहरुको लास कुल्चिदै दुई पटक सिंहदरबारको आशनमा आशिन त भए तर जनयुद्धका नाममा ज्यान गुमाउनेहरु, अपाङग र घाइतेहरुका पक्षमा के गरे ? बरु कमरेड प्रचण्ड आज नेपालका सबैभन्दा धनी मानिस बनेका छन् । आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न विदेशीको पाउमा पर्न समेत पछी पर्दैनन् । निरन्तर उनी विचलन र स्खलनको बाटोमा छन् । तपाई आफै विचरण गर्नुहोस, आफुलाई जनयुद्धको सृष्टिकर्ता दावी गर्ने कमरेड लालध्वजका बोली र व्यवहार कति उचित छन् ?
काँग्रेस नै हो यो मुलुकमा भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद र तस्करीको पोषक । सरकारमा बसेको दिनलाई गणना गरेर वर्षमा बदल्ने हो भने झण्डै पन्ध्र वर्ष सरकारमा बसेको काँग्रेसले के गर्यो देश र जनताका लागि ? उदारवादका नाममा २२ वटा उद्योग र कलकारखानाहरु बन्द मात्र गराएन, कौडीको भाउमा बेचेर खायो ।
गणतन्त्र ल्याउन आन्दोलन गरेका काँग्रेस र एमालेको अवस्था पनि भिन्न छैन । सत्तामा छँदा देश र जनताको पक्षमा सोच्ने फुर्सदसम्म पनि भएन उनिहरुलाई । २०४८ सालमा बहुमतको सरकार बनाएको काँग्रेस नै हो फरक विचारलाई दमन गरेर जंगल पठाउने कार्यको नेतृत्वकर्ता । काँग्रेस नै हो त्यस यताको राजनीतिक अस्थिरताको कारक । काँग्रेस नै हो यो मुलुकमा भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद र तस्करीको पोषक । सरकारमा बसेको दिनलाई गणना गरेर वर्षमा बदल्ने हो भने झण्डै पन्ध्र वर्ष सरकारमा बसेको काँग्रेसले के गर्यो देश र जनताका लागि ? उदारवादका नाममा २२ वटा उद्योग र कलकारखानाहरु बन्द मात्र गराएन, कौडीको भाउमा बेचेर खायो । राज्यका सबै निकायहरुमा चरम काँग्रेसीकरण गर्यो । जसले गर्दा आज राज्यका सबैजशो निकायहरुमा अराजकता मौलाइरहेको जो कोहिले पनि देख्न सक्छ । काँग्रेसका नेताहरु खुमबहादुर खड्का, चिरन्जीवी वाग्ले मात्र नभएर काँग्रेसकै पुर्व नेता जेपी गुप्ता भ्रष्टाचारी प्रमाणीत भएर जेल बसे । गोबिन्दराज जोशीले पनि जेलको टिकट काटी सके । तर दावी गर्छ गणतन्त्र हाम्रो नेतृत्वमा आयो ।
नेपाली राजनीतिमा अकल्पनीय परिवर्तन नभए उनि चौथो पटक नेपालको प्रधानमन्त्री बन्ने छन् । फेरी उनै असफल, सुरा सुन्दरीवाल तथा पजेरो र प्राडो जस्तो विकृत संस्कृतिको सुरुवातकर्ता, नेपाली राजनीतिका खलपात्र देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने कुराले जनतामा संसय पैदा गरेको छ ।
यो कुरा त अलि पुरानै भयो । शेरबहादुर देउवा काँग्रेसको सभापति बनेको एक वर्ष बित्दा नबित्दै सासु आमालाई जापानको राजदुत बनाएर पठाए । आफ्नो भेग मिल्ने र मोटो कमिशनको लाभमा परेर कनिष्ट डिआइजी जयबहादुर चन्दलाई नेपाल प्रहरीको आइजीपी बनाउने निर्णय जर्बजस्त गर्न लगाए । त्यस बाधक बनेको आरोपमा प्रधानन्यायाधिस सुशिला कार्कीमाथी महाअभियोग लगाए । पैसाका लागि राजदुतको पद बेचे । यिनै देउवा हुन २०५८ सालमा संसद विघटन गरेर प्रजातन्त्र दरबारमा बझाउने । तीन पटक प्रधानमन्त्री भैसके । अझैपनि प्रधानमन्त्री बन्ने ध्याउन्नेमा लागिरहेका छन् । नेपाली राजनीतिमा अकल्पनीय परिवर्तन नभए उनि चौथो पटक नेपालको प्रधानमन्त्री बन्ने छन् । फेरी उनै असफल, सुरा सुन्दरीवाल तथा पजेरो र प्राडो जस्तो विकृत संस्कृतिको सुरुवातकर्ता, नेपाली राजनीतिका खलपात्र देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने कुराले जनतामा संसय पैदा गरेको छ ।
विकृत राजनीतिबाट एमाले पनि टाढा छैन । एमालेमा पनि नातावाद, कृपावाद, धनवाद र डनवाद निकै हावी भएको अवस्था छ । पार्टीमा एनजीओवाल, ठेकेदार र माडेतन्त्र हावी छ । राजनीतिक नियुक्तीमा भागबण्डा मात्र नभएर किनबेच व्याप्त छ । जसका कारण इमान्दार कार्यकर्ता पाखा लाग्दै गएका छन् । समाजमा बद्नामी कमाएकाहरुको तामझाम बढ्दो छ ।
गरिब जनताले तिरेको करबाट तलब खाने कर्मचारीतन्त्र झनै विकृत छ । राजनीतिज्ञहरुलाई देखाउँदै सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार गर्न सिकाउने मात्र होइन आफै त्यसमा लिप्त छ । जनतालाई सेवा होइन अपमान र अन्याय गर्ने काममा कर्मचारीतन्त्रले नेतृत्व लिएको छ । प्रशासनिक क्षेत्रका मानिसहरु देश लुटेर आर्जन गरेको सम्पक्तीका आधारमा आज आडम्बर प्रर्दशन गरिरहेका छन् । यस तर्फ कसैको पनि ध्यान छैन । राजनीतिक दलहरुलाई मात्र गाली गरेर आफु पानीमाथीको ओभानो बन्न कोशिस गर्ने कर्मचारीतन्त्रमा नैतिकता र आदर्श भन्ने चिज भेट्न कठिन छ ।
त्यसैले भन्नैपर्छ की गणतन्त्र कागजमा सीमित छ । गणतन्त्र संविधानका धाराहरुमा कैद छ । गणतन्त्र नेताको सनक र तस्करको पैसामा किनबेच भैरहेको छ । जनताले अनुभुति गर्ने किसिमको गणतन्त्र ल्याउन, सबै नेपाली खुशी हुने अवस्था सिर्जना गर्न फेरी अर्को जनआन्दोलनको आवश्यकता छ । अहिलेसम्मका सबै अनुभवहरुले भन्छन्, व्यवस्था परिवर्तन गरेर मात्र आम मानिसको जीवनमा परिवर्तन नआउँदो रहेछ । मुल कुरा अगुवाहरुको व्यवहारमा परिवर्तन आवश्यक पर्दोरहेछ । आउनुहोस चौतर्फी रुपले समस्याग्रस्त रहेको र अभिभावकत्व नपाएको टुहुरो गणतन्त्रको सुदृढिकरणमा लागौँ ।
भर्खरै मात्र युरोपको सम्पन्न देश अष्ट्रीयामा ३१ ...
डुब्यो देउवा एण्ड कम्पनी !
राष्ट्र र जनताप्रतिको गैरजिम्मेवारीपनको पराकाष्टा...
करिब साढे दुई फिट चौडा परम्परागत काठको डुङ्गामा खु...
पुँजीगत खर्चको अवस्था यो वर्ष विकास खर्च रु. ४ ख...